राजनीति – Page 186 – MeroJilla.com
६ देशका राजदूतको सूची ! Thursday, May 22nd, 2014
काठमाण्डौं, ८ जेठ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि रिक्त ६ देशका राजदूत नियुक्तिको तयारी गरेको छ । बिहीबार बसने मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियूक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कर्मचारीको कोटाबाट राजदूत हुनेको नाम सिफारिसका लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पेस गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। हाल १६ देशमा राजदूत रिक्त रहेको..
संविधानसभा बैठक आज पनि
जेष्ठ ८/ संविधानसभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा अघिल्लो संविधानसभाको राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको असहमतिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा असहमतिको सूचीमा रहेको छ । सैन्य तालिममा एनेकपा माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् । दिउसो १ बजेपछि..
एमाओवादीको आजको बैठकमा भट्टराई जाँदै
जेष्ठ ८, एकीकृत माओवादीका असन्तुष्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईसहितका असन्तुष्ट नेताहरु आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । विभिन्न विषयमा असहमति राख्दै आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भट्टराई पक्षले निर्णय गरेको हो । वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक विषयमा महाधिवेशनसम्म पार्टी पुनर्संरचनालगायत विषयमा खुला छलफल गर्ने, सात बुँदे असहमति पार्टीको तल्लो..
पत्रकारको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध : गृहमन्त्री Wednesday, May 21st, 2014
जेठ ७, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले वुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको महिला पत्रकारको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले पत्रकारको व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाहसँगै, भौतिक सुरक्षाको जरुरी भएकाले त्यसमा सरकारको सधैँ सहयोग रहने बताएइ । पत्रकारले..
मुलुकले धान्न सक्नेगरी प्रदेश बन्नुपर्छ– प्रधानमन्त्री कोइराला
काठमाडौँ,जेठ ७ गते । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ बन्ने संविधानसँगै निर्माण हुने प्रदेश मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने सङ्ख्यामा मात्र बन्ने बताउनुभएको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको राज्य पुनःसंरचना विषयक अन्तक्र्रियाको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वमा प्रचलित सङ्घीयस्वरुपको अध्ययन गरी नेपालमा पनि सामथ्र्यका आधारमा..
जेठ ७/ संविधानसभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा अघिल्लो संविधानसभाको राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको असहमतिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा असहमतिको सूचीमा रहेको छ । सैन्य तालिममा एनेकपा माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् । दिउसो १ बजेपछि बस्ने..
कोईराला नेतृत्तवको सरकारले एकसय दिन पुरा गर्यो
जेठ ७\_ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आज सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले सय दिन दिभन गरेका कामको भने सत्तारुढ दल र विपक्षीदलहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकार गठनपछि संविधानसभाका बिभिन्न समितिहरुको गठन, विभिन्न समयमा जारी भएका अध्यादेशहरु पारित र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन विधेयक पारित हुनुलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन् । तर,..
अध्यक्ष १८० डिग्रिमा बदलिए : भट्टराई Monday, May 19th, 2014
काठमाडौँ,जेठ ५ गते । एकीकृत नेकपा माओवादी विवाद फेरि बल्झिएको छ । आन्तरिक भागबण्डामा नेता बाबुराम भट्टराईले राखेको प्रस्तावमा शनिबार अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल लचिलो बनेपछि करिब सहमति भएको भनिएको दुई पक्षीय छलफल आइतबार पुन विथोलिएको छ । अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको शीर्ष नेताहरुको बैठक बिथोलिएसँगै सोमबार बस्ने भनिएको एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अनिश्चित..
काँग्रेस र एमाले जनतालाई दास बनाउने खेलमा – चन्द Sunday, May 18th, 2014
गिता सुवेदी पर्वत, ४ बैशाख - नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सचिव तथा प्रभावशाली नेता नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले काँगे्रस एमाले लगायतका नेताहरुले भावनामा माया देखाउने तर, विचारमा अडान लिने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले गति लिन नसकेको बताएका छन् । नेकपा–माओवादी पर्वतको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा राखिएको कार्यकर्तासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । चन्दले..
कोइराला र प्रचण्डबीच भेटघाट
जेठ ४, काठमाडौं । सादगी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर भेटघाट भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान निर्माण लगायतको विषयमा छलफल छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बिहान भएको भेटवार्तामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने विषयमा छलफल..
राजनीतिक सम्वाद समितिको वार्ता प्रस्ताव वैद्यद्वारा अस्विकार Friday, May 16th, 2014
शुक्रबार २ जेष्ठ काठमाडौं( नेकपा(माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिसँग वार्ता नगर्ने जनाएका छन्। शुक्रबार सिंहदवारमा बसेको बैठकमा सभापति भट्टराईले नेकपा(माओवादी अध्यक्ष वैद्यले वार्ता अस्विकार गरेको बताएका छन्। वैद्य नेतृत्वले गोलमेच सम्मेलनको माग गरेकाले समितिसँग वार्ता अस्विकार गरेको सभापति..